Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Archives | 2015 | October
Posted on October 31, 2015 by freeburma
အခုရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၈၀၀ ကျော် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပိုပြီးရှိသင့်တယ်လို့ ထောက်ပြနေကြချိန်မှာ အမျိုးသမီး
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက ၁၀% ကျော်ပဲ ရှိနေတဲ့ အပေါ် မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့
သဘောထားကို မမြင့်မြင့်ခိုင်က စုံစမ်း တင်ပြထားပါတယ်၊
via Voice of America http://ift.tt/1GEdE4t http://ift.tt/Tf1V41
တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ အရေးပါမှု
လွှတ်တော်မှာ တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ အရေးပါမှုနဲ့ လွှတ်တော်ထဲ
အမျိုးသမီးတွေ ပိုရောက်နိုင်ရေးနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ဗဟန်းမြို့နယ်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ဝင်ရောက်ပြိုင်ဆိုင်မဲ့ တသီးပုဂ္ဂလ
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်းကို VOA ရန်ကုန်ရုံးတာဝန်ခံ
via Voice of America http://ift.tt/1MoxH32 http://ift.tt/Tf1V41
အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲဝင် ကျောင်းသားများကို ထောက်ခံလမ်းလျှောက် (ဓာတ်ပုံ)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေး အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲဝင် ကျောင်းသားတွေကို ထောက်ခံဆုတောင်းလမ်းလျှောက်ပွဲ ညနေ ၃ နာကျော်က ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေစေတီတော်မှာ[…]
The post အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲဝင် ကျောင်းသားများကို ထောက်ခံလမ်းလျှောက် (ဓာတ်ပုံ) appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1NfY9kA http://burmese.dvb.no
မြန်မာအစိုးရက ဘင်္ဂါလီလို့ခေါ်ပြီး သူတို့ကိုယ် သူတို့ ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်တဲ့သူတွေ အပေါ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်နေတယ် ဆိုတဲ့ ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားတွေ တွေ့ရှိ ထားတဲ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂ အနေနဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းစုံစမ်းပေးဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်တဲ့ Fortify Rights အဖွဲ့က တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ပြောဆိုမှုဟာ တဖက်သတ် ဆန်လွန်းတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေတွေ က ထောက်ပြကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးပါမယ်။
Fortify Rights အဖွဲ့က…
via Voice of America http://ift.tt/1NHdIjy http://ift.tt/Tf1V41
Posted in Intelligence - နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ	| Tagged Ethnics, Feedly, IFTTT, Intelligence, Recently Read	| Leaveacomment |
via သတင်းများ http://ift.tt/1PaYipf http://www.rfa.org
သတင်းမီဒီယာတွေ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဦးစားပေးဖော်ပြမှု MID အစီရင်ခံစာ ထောက်ပြ
via သတင်းများ http://ift.tt/1N0QGRJ http://www.rfa.org
ဦးမိုးသီးဇွန်နဲ့ မေးမြန်းခန်း (၁၀-၃၀-၂၀၁၅)
NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒါဟာ ရွေးကောက်ပွဲကို ပျက်အောင် လုပ်ချင်တာလား၊ ရွှေ့ဆိုင်းအောင် လုပ်ချင်တာလား ဆိုတာ စိုးရိမ်စရာ ရှိလာတယ်လို့ ဦးမိုးသီးဇွန် က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ သာကေတမြို့နယ်မှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးနေချိန် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးနိုင်ငံလင်းနဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေ ကြာသပတေးညက ဓားနဲ့ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး – အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖို့ဝိန်းမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ ဦးမိုးသီးဇွန် ကို ဗွီအိုအေဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း က Skype ကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
via Voice of America http://ift.tt/1N0QGBl http://ift.tt/Tf1V41
ဦးနိုင်ငံလင်း တိုက်ခိုက်ခံရမှု တုံ့ပြန်ခြင်းမလုပ်ရန် အန်အယ်လ်ဒီ ကြေညာချက်ထုတ်
သာကေတမြို့နယ်မှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရင်း တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးနိုင်ငံလင်းတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တနိုင်ငံလုံးက အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့[…]
The post ဦးနိုင်ငံလင်း တိုက်ခိုက်ခံရမှု တုံ့ပြန်ခြင်းမလုပ်ရန် အန်အယ်လ်ဒီ ကြေညာချက်ထုတ် appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1PaYhBY http://burmese.dvb.no
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးရုံဖြင့် မပြီးဘဲ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ကြရမည်
via moi http://ift.tt/1LHOxwG http://ift.tt/1KnLGaX
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC) ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေး ဆက်လက် ကျင်းပ
via moi http://ift.tt/1LHOyRb http://ift.tt/1KnLGaX
Posted in Ethnics - တိုင်းရင်းသားများဆိုင်ရာ	| Tagged Ethnics, Feedly, IFTTT, Intelligence, Recently Read	| Leaveacomment |
Posted on October 30, 2015 by freeburma
ဓါးခုတ်ခံရသည့် NLDအမတ်လောင်း အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်စရာမရှိဟု ဆရာဝန် အတည်ပြု
ရွေးကောက်ပွဲ သတင်း ဓာတ်ပုံများ
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၃၀။ ။ မဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ် ဓါးဖြင့်ခုတ်ခံရသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၏ အမတ်လောင်း ဦးနိုင်ငံလင်းမှာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်စရာ လုံးဝမရှိဟု ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းက ခွဲစိတ်မှုအပြီး အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
“အသက်အန္တရာယ် လုံးဝမရှိပါဘူး။ ကောင်းတယ်ပဲ ပြောရမှာပေါ့။ ဦးနှောက်ထဲမှာ သွေးယိုတာတို့ လုံးဝမရှိဘူး။ သွေးထွက်လွန်တာတို့၊ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းလည်း ထိတာ မတွေ့ရဘူး။ ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းက ပြောသည်။
NLDပါတီ၏ တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်လောင်း ဦးနိုင်ငံလင်းအပါအဝင် ပါတီဝင် သုံးဦးမှာ အောက်တိုဘာ ၂၉ရက်၊ ည ၉နာရီက သာကေတမြို့နယ်ရှိ မန်ပြေ(၈)လမ်းတွင် ဓါးဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရပြီး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရခြင်းဖြစ်ပြီး ဦးနိုင်ငံလင်းမှာ ဦးခေါင်း၊ လက်နှစ်ဖက်နှင့် နဖူးတို့တွင် ဓါးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒဏ်ရာရရှိသူများအနက် ဦးနိုင်ငံလင်းမှာ အပြင်းထန်ဆုံး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/1WlfsXg http://ift.tt/1nfHMox
“သံသယ အပြည့်နဲ့ စောင့်ကြည့်ခံရတော့မယ့် ရွေးကောက်ပွဲ”
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ ပြည်သူတွေက သံသယ ၀င်နေကြတဲ့အထဲ ပိုပြီး သံသယ ပွားစရာ သတင်းတွေ ထပ်ပြီး ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တပ်မတော်ရေတပ်သား အယောက် ၂၀၀ လောက်ရဲ့ မဲစာရင်းတွေဟာ ရန်ကုန်တိုင်း ကိုကိုးကျွန်း မဲဆန္ဒနယ်နဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း ငပုတောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် နှစ်ခုစလုံးမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ကိစ္စပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ မန္တလေးတိုင်း မဟာအောင်မြေ မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာ မဲပေးခွင့်ရသူ စာရင်း ၁၄၀၀၀ နီးပါးရှိရာမှာ လူ ၅၀၀၀ ကျော်လောက်ရဲ့ မဲစာရင်း ပို ပြီးပါနေတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒီပြသနာတွေ ဘယ်လို ဖြစ်ရတာပါလဲ၊ ဒီ ပြသနာကြောင့် နောင် ဘယ်လို အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ ဆိုတာ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေး တင်ပြသွားပါ့မယ်။
ပထမ ပြသနာက ရန်ကုန်တိုင်း ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ် အမှတ် ၂၇ ရေတပ်စခန်း နဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း ငပုတောမြို့နယ် ပမ္မ၀တီ ရေတပ် စခန်းမှာ ရှိတဲ့ မဲစာရင်းတွေကို အင်န်အယ်လ်ဒီ ပါတီဝင်တွေက တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးကြည့်ရာမှာ တွေ့ရှိတဲ့ အချက်ပါ။ ဒါနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကိုကိုကျွန်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ကလည်း တပ်မတော်သား ၁၉၁ ယောက်ရဲ့ မဲစာရင်းတွေ တူနေတာ မှန်တယ်လို့ အတည်ပြုချက် ပေးပြီးပါပြီ။ တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်၊ တပ်မတော်သား တစ်ယောက်ဟာ မဲဆန္ဒနယ်မြေ နှစ်ခုမှာ မဲစာရင်းပါနေတာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ မဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ့် တာဝန်ဟာ တပ်မတော် ရေတပ် တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ကော်မရှင် နှစ်ဖက် စလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အဲလို မဲစာရင်း နှစ်နေရာမှာ ပါနေတာကြောင့် မဲ မသမာမှု ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ရှိလို့ပါပဲ။
အဲဒီ တပ်မတော်သား တစ်ယောက်ဟာ တစ်နေရာမှာ ကြိုတင်မဲပေးပြီး အခြား တစ်နေရာမှာ မဲပေးတဲ့ နေ့ကျမှ ရိုးရိုး မဲသွားပေးရင် ဘယ်သူမှ တားဆီးလို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လည်း ကိုကိုးကျွန်း အမှတ် ၂၇ ရေတပ်စခန်းမှာ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၆၃၄ ယောက်အနက် ၃၄၁ ယောက်ဟာ ကြိုတင်မဲပေးဖို့ စာရင်း တင်ထားပြီးပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့များ အဲဒီထဲမှာ မဲစာရင်း ထပ်နေသူတွေ ပါဝင်ရင် ကိုကိုးကျွန်းမှာလည်း ကြိုတင်မဲပေး၊ ဧရာဝတီတိုင်း ပမ္မ၀တီ ရေတပ် စခန်းမှာလည်း ပုံမှန်မဲပေး ဆိုတာမျိုး ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ ပြသနာဟာ စေ့စပ်သေခြာမှု ရှိတဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်တွေက စုံစမ်းဖော်ထုတ်လို့ သိရတဲ့ အချက်ပါ။ အခြား တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့က အခြေအနေတွေ၊ ၀န်ထမ်း မဲစာရင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ခုလို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ လွယ်ကူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အလားတူ မန္တလေး မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် နဲ့ မြို့နယ် အတော်များများမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မဲစာရင်း ပိုလျှံမှု ပြသနာကလည်း အလားတူ ပြသနာ မျိုးပါပဲ။ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ် မဲစာရင်းမှာ လူ အယောက် ၁၄၀၀၀ လောက် ဖော်ပြထားတဲ့အနက် တကယ်နေထိုင်တာ ၉၀၀၀ တောင် မပြည့်ပါဘူး။ လူစာရင်းမှာ အယောက် ၅၀၀၀ ကျော် ပိုနေတာပါ။ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တွက်ရင် တကယ်နေထိုင်တဲ့ သူအရည်အတွက်ရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပိုနေတာပါ။ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် ကတော့ ပိုဆိုးပါတယ်။ တကယ်နေထိုင်သူတွေထက် မနေပဲ စာရင်းထဲ ရောက်နေသူတွေက ပိုများနေတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက သတ်မှတ် မြို့နယ် ၃၃၀ အနက် အဲလို စာရင်း အပိုတွေ ထွက်နေတဲ့ မြို့နယ် အများကြီး ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။
အဲဒီလို မဲစာရင်းထဲ ပိုနေတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်လာနိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ပထမ တခုကတော့ မဲမသာမှု ဖြစ်နိုင်တာပါ။ လူတစ်ချို့၊ တပ်မတော်သား တစ်ချို့၊ ၀န်ထမ်းတစ်ချို့ဟာ တစ်နေရာမှာ ကြိုတင်မဲ ပေးပြီးနောက် တကယ် မဲပေးမယ့် နေ့ ကျရင် အဲဒီလို လူမနေတဲ့ နာမည် တစ်ခုကို အသုံးပြုပြီး အခြား တစ်နေရာရာမှာ မဲသွားပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ အခု ဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်ပြီး ၀န်ထမ်းတစ်ချို့၊ လူတစ်ချို့ဟာ တပ်မတော် ရေတပ်သားတွေလို နှစ်နေရာ ဒါမှမဟုတ် နှစ်နေရာ မကမှာ မဲစာရင်းတွေ ပါနေနိုင်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲလို ဖြစ်တာဟာ ကြိုတင် ပြင်ဆင် ထားတဲ့ ကြံစည်မှု ဆိုရင် အလွန်စိုးရိမ်စရာ ကောင်းပြီး မဲဆန္ဒနယ်မြေ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ မဲရလာဒ်ကိုလည်း ပြောင်းလဲ သွားစေနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပြသနာကတော့ မဲစာရင်း တွက်ချက်မှုပါ။ မဲစာရင်းမှာ လူတွေ ပိုနေတာဟာ အမတ်လောင်းတွေ မဲရရှိမှု၊ မဲ အသာနဲ့ အနိုင်ရရှိမှု အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပေမယ့် အနိုင်ရတဲ့ အမတ်လောင်း အပေါ် ပြည်သူလူထု ထောက်ခံမှုကို တွက်ချက်ရာမှာ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုအပေါ် ပြည်သူလူထု ထောက်ခံမှုကို တွက်ချက်ရာမှာ မှားယွင်းမှု အများကြီး ကြုံရနိုင်ပါ တယ်။ ပြည်သူ တစ်ချို့ မှတ်မိကြပါလိမ့်ဦးမယ်။ အရင် စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ အင်န်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က အမတ်နေရာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် နဲ့ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရတဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။
တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှလည်း လွှတ်တော် ခေါ် မပေးခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီခေတ် အဲဒီ အခါက ထုတ်ဝေတဲ့ အစိုးရပိုင် သတင်းစာတွေမှာ ဆောင်းပါးတွေရေးကြတော့ တိုင်းပြည်မှာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ အဲဒီထဲကမှ အင်န်အယ်လ်ဒီ အမတ်တွေကို မဲပေးတဲ့သူ ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက်ပဲ ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် ထောက်ခံသူ သိပ် များများစားစား မရှိလှဘူး ဆိုပြီး အမြဲတစေ ဆင်ခြေပေး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပါတီ တစ်ခုက အမတ်တွေ ရတဲ့ မဲကို မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူ စာရင်းနဲ့ တွက်ချက်ပြီး ဖော်ပြတာမျိုးပါ။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အလွန်ကာလ မှာလည်း အာဏာပိုင်တွေဟာ အဲလို မှန်ကန်မှု မရှိ၊ ဖေါင်းပွနေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ မဲစာရင်း ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တွေကို ကိုးကားတွက်ချက် ပြောဆိုလာနိုင်ဖွယ် ရှိနေလို့ပါပဲ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲ အလွန်နီးကပ်လာတဲ့တိုင် ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် အမတ်တွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို မယုံမကြည် သံသယ နဲ့ ကြည့်နေကြရတဲ့ အခြေအနေပါ။ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြရတဲ့ အခြေအနေပါ။ အတော့်ကို သိသာ ထင်ရှားလွန်းတဲ့ ကိုကိုးကျွန်းနဲ့ ငပုတော မြို့နယ်မှာ ရေတပ်သား ၂၀၀ လောက် မဲစာရင်း နှစ်နေရာ ပါနေတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ တစ်နေရာကနေ ဖျက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း မြို့နယ် အလိုက် ပိုနေတဲ့ စာရင်းတွေကိုတော့ လုံးဝ ဖျက်ပေးတာ မတွေ့မမြင်ကြရပါဘူး။ ဒီအတွက် လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ သံသယ အပြည့်နဲ့ စောင့်ကြည့်ခံရမယ့် ရွေးကောက်ပွဲသာ ဖြစ်မယ့်အကြောင်း သုံးသပ် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/1WlfsGL http://ift.tt/1nfHMox
ကြာသာပတေး ညပိုင်းက ရန်ကုန် သာကေတ မြို့နယ်ထဲမှာ ဓားရှည် နဲ့ အတိုက်အခိုက် ခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ ရဲ့ လွှတ်တော် အမတ် ဦးနိုင်ငံလင်း ဟာ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး မှာ အရေး ပေါ်
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin http://ift.tt/1P0ZzRv http://ift.tt/Y2RpwJ
Posted in Election - ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ	| Tagged Election, Feedly, IFTTT, Laws, Recently Read	| Leaveacomment |
ကြိုတင်​မဲပုံးများ လုံခြုံ​ရေး မင်္ဂလာ​တောင်​ညွန့်​မြို့နယ်​တွင်​ ချိပ်​ပိတ်​စနစ်​ ကျင့်​သုံး
လက်​နဲ့အလွယ်​တကူတကူ နှိုက်​လို့ရတယ်​လို့ လူ​ပြောများ​နေတဲ့ ကြိုတင်​မဲပုံး​တွေ လုံခြုံ စိတ်​ချရဖို့အတွက်​ မင်္ဂလာ​တောင်​ညွန့်​မြို့နယ်​၊ သ​ပြေကုန်းရပ်​ကွက်​မှာ ချိပ်​ပိတ်​တံဆိပ်​နှိပ်​ခဲ့ ပါတယ်​။[…]
The post ကြိုတင်​မဲပုံးများ လုံခြုံ​ရေး မင်္ဂလာ​တောင်​ညွန့်​မြို့နယ်​တွင်​ ချိပ်​ပိတ်​စနစ်​ ကျင့်​သုံး appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1XDi4wP http://burmese.dvb.no
Posted in LAWS - ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ	| Tagged Election, Feedly, IFTTT, Laws, Recently Read	| Leaveacomment |
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေး ပထမနေ့ စတင်
via moi http://ift.tt/1RhA7oj http://ift.tt/1KnLGaX
Posted on October 28, 2015 by freeburma
“အင်တာနက်မှာ ကျနော်တို့ ကြည့်ရင် ၊ ကျနော်တို့ကို စောင့်ကြည့်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ ကျနော်တို့ကို နောက်က trail လိုက်တာတွေရှိတယ်။ ကိုယ့် email တွေကို ၀င်ဖတ်တာတွေရှိတယ်။”
via Voice of America http://ift.tt/1N8DM8N http://ift.tt/Tf1V41
ကိုကိုးကျွန်းနဲ့ ဟိုင်းကြီးကျွန်းက တပ်မတော်သားမဲပေးခွင့်ရှိသူစာရင်း ၂၀၀ ခန့် တူညီနေ
ဟိုင်းကြီးကျွန်းက ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ် မှာရှိတဲ့ မဲပေးခွင့်ရှိသူစာရင်းထဲက လူ ၂၀၀ ဟာ ကိုကိုးကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်က မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်းထဲမှာ ပါနေကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စား လှယ်လောင်းတွေက ပြောပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1GJNZqU http://www.rfa.org
ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ဟောပြောဖို့ ခွင့်ပြုချက်မရ ရှိသေး
လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ ရန်ကုန် မြို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာကျင်းပမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ရွေးကောက် ပွဲအောင်နိုင်ရေး ဟောပြောပွဲအတွက် နေရာ ခွင့်ပြုချက်မရသေးကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ဥက္ကဌ ဦးမြင့်ဌေးက ပြောပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1Wj4dJx http://www.rfa.org